KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Yuu ahaa Cumar Shafiq Xamami “Al-Amriki”?
Friday 13 September 2013 06:36
Yuu ahaa Cumar Shafiq Xamami “Al-Amriki”?
London (Keydmedia) - Aqriste maxaad ka taqaan Taariikhda Abu Mansuur Al-Amriki? Yuu ahaa Al-Amriki? Cumar Shafiq Xamami oo loo yaqaano Abu Mansuur Al-Amriki wuxu ku dhashay xaafada Daphne ee duleedka Mobile, Alabama ee dalka Maraykanka taariikhdu markey aheyd Maajo 6, 1984.
Cumar waxa iska dhalay aabe Suuriyaan Muslina ah iyo hooyo Maraykan Kirishtaana ah oo haysata mad-habta Southern Baptist ee Protestant-ka mayalka adag ah.
Cumar oo ku koray diin la'aan wuxu bilaabay inuu sheegto diinta Islaamka markii uu qaangaaray ee uu ku jiray dugsiga sare ee Daphne High School. Markii uu dhameeyay dugsiga sare wuxu ku biiray jaamacadda Southern Alabama, halkaasoo uu ku noqday nin si buuxa ugu dhaqma diinta Islaamka, isagoo sheegan jiray mad-habka Salafka.
Sannadkii 2002 ayuu meel dhexe uga tagay jaamacadii uu mar ka ahaa madaxa ururka ardada Muslimiinta ah.
Waxaa la sheegaa inuu Abu-Mansuur baranayay qaabeynta aaladda Internet ka Computer Science, oo uu markii dambe ku taakuleeyay ururka Al-Shabaab isagoo u ahaa ninka u soo saara una habeeya bogagooda dacaayadda ee Internetka.
Sannadkii 2004 wuxu Abu-Mansuur u guuray magaalada Toronto, ee dalka Canada, halkaasoo uu kula saaxiibay dhalinyaro Soomaali ah oo ku xirnaa masaajidka Khalid Bin Waliid ee ururka Al-Itixaad uu ku lee yahay Toronto.
Abu Mansuur wuxu si fiican u bartay Soomaalida kadib markii uu ka shaqo bilaabay shirkad Soomaaliyeed oo caanaha Lo'da ugu geyn jirtay guryaha Soomaalida ee Dixon Rd ku yaal iyo maqaayad lagu iibin jiray Halal Piza.
Halkaas wuxu ku guursaday Abu Mansuur gabar Soomaali ah oo sannadkii 2005 uu ula guuray magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxana halkaas ugu dhashay gabar.
Isla sanadkaas 2005 wuxu Qaahira kula kulmay Daniel Maldonado Aljughaifi(sawirka kore) oo ahaa nin Maraykan ah oo soo Muslimay sannadkii 2000. Daniel oo sida uu qoray wargeyska Boston Globe dambiyo yar yar ka galay sharciga Maraykanka, wuxu noqday Muslim aad u dhaleeceeya Muslimiinta kula tukan jirtay masaajidka magaaladiisa Methuen, Massachusetts. Waxayna taasi gaarsiisay in Imaamkii masaajidkaas uu u sheego Daniel inuu joojiyo wax ka sheega Muslimiinta kale ama uu ka tago Masaajidka.
Daniel iyo Abu Mansuur waxay si qarsoodi ah go'aan ugu gaareen inay ku biiraan golihii Maxaakimta ee uu hogaamin jiray Shiikh Shariif Sh. Axmed, waxayna usoo dhoofeen bishii Nofembar 2006 magaalada Muqdisho, iyagoo aan ogeysiin qoysaskoodii. Xaaskii Abu Mansuur ee Soomaalida aheyd, waxa la sheegaa in muddo kadib ay tigid diyaaradeed u direen reerkoodii ku sugnaa Toronto oo ay ka soo dhooftay Qaahira dibna ugu laabatay Canada.
Markii ay ciidamada Itoobiyaanka ahi soo galeen Muqdisho Daniel iyo Abu Mansuur waxay u qaxeen koonfurta Jubooyinka, waxayna ku kala dhumeen halkaas, oo Daniel wuxu gudaha u galay dalka Kenya halkaasoo lagu qabtay bishii Janaayo 21 2007 dibna loogu soo dhoofiyay Maraykanka oo uu hada ku xiran yahay.
Laakiin Abu Mansuur waxa usuurto gashay inuu ku nagaado gudaha Soomaaliya, halkaasoo uu ku biiray ururka Al-Shabaab kadib markii garabkii kale ee Maxaakimta uu u guuray Asmara. Markii ugu horaysay bishii Oktoobar 2007 wuxu soo saaray Abu Mansuur waraysi uu siinayay Al-Jaziira isagoo afku uusan u duubneyn.
3 bilood kadib wuxu soo saaray Abu Mansuur warqad qoraal ah oo uu ku sheegayo hadafka Al-Shabaab oo ah inay qabsadaan Bari iyo Galbeedka aduunka dacaladiisa, kana dhisaan Qaliifa Islaami ah, kadib marka ay jabiyaan gaalada, ayna laayaan Murtadiinta, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa intaas ku xigay cajilado maqal iyo muuqaal ah, oo ay Maraykanku ku tilmaameen inuu ku jiitay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku koray Maraykanka, markii dambana ku biiray Al-Shabaab.
Sannadkii 2007 bilowgiisii iyo dhamaadkiisiiba maxkamadaha Maraykanka kuwo heer gobol iyo kuwa federal ahba waxay soo saareen eedaymo iyo warqado lagu soo xirayo Abu Mansuur meeshii lagu arko, lana horkeenayo sharciga Maraykanka.
Luulyo 8 2009 wuxu soo saaray Abu Mansuur cajilad uu ugu jawaabayo qudbadii Barack Obama uu ka jeediyay Qaahira ee uu kusoo jiitay madaxda Bariga Dhexe, wuxuna uga digay Abu Mansuur Muslimiintu inaysan ku kadsoomin aftahanimada Obama. Wuxuna isla cajiladaas ku cadeeyay in Al-Shabaab ay hoostagaan Al-Qaacida, wuxuna difaacay weeraradii Sebtember 2001.
Bishii Maarso 2011 dowladda Soomaliya waxay sheegatay inay dileen Abu Mansuur, waxaase beeniyay sheegashadaas wargeyska ku hadla afka Argagixiso-ladirirka ee The Long War Journal. Mudo yar kadib Abu Mansuur wuxu soo saaray Anaashiid uu ku beeninayo dilkiisa, wuxuna ka codsaday Maraykanka inay usoo diraan diyaaradaha is-wada si uu u helo Shahaado.
Isla sannadkaas bishii Luulyo Maraykanku wuxu sheegtay inay duqeyn ku dileen Abu-Mansuur, wuxuuse beeniyay sheegashadaas 17 Maarso 2012 kadib markii uu soo saaray cajilad uu ku sheegayo in naftiisu ay khatar ku jirto uuna ka cabsi qabo inuu ku baxo gacanta ururkii uu ku sheegay inay maamuli doonaan aduunka oo idil Bari iyo Galbeed.